समाचारका लागि ज्यान बचाउँदै… – United We Blog
समाचारका लागि ज्यान बचाउँदै…
Posted byUWB March 9, 2006 Posted inGuest Column
माओवादीले इलाम आक्रमण गर्ने हल्ला दुइ वर्षअघिदेखिकै हो । फागुन २१ गते राति यो हल्ला यथार्थमा बदलियो । तिनले सदरमुकाम इलाम बजारमा आक्रमण गरी छाडे । त्यसदिन साँझ पर्दानपर्दै ‘माओवादीले इलाम बजार हान्दैछ’ भन्ने सूचना आयो । कतिपयले भन्दै थिए ‘तपाई आज राती कोठामा नबस्नुहोला ।’
घर सदरमुकामदेखि टाढा भएकाले म इलाम बजारको वीरेन्द्रचोकनजिक कोठामा बस्दैआएको छु । म बस्ने घर प्रहरीलगायत प्रशासनिक कार्यालय नजिक छ । आज आक्रमण हँुदैछ भन्ने सूचना पाए पनि मैले कोठा छाडिन । अन्यत्र जुनसुकै समयमा सजिलै समाचार तथा फोटो इमेल गर्ने सुविधा मिल्दैन । फेरी, आक्रमण भएरै छाड्छ भन्ने पनि भएन ।
एक्कासी फोन बज्यो । ‘माओवादी बजार पसिसके, तु सुरक्षित ठाउँमा जानू’ । लगत्तै ड्याम्म…धुडुम विस्फोटका आवाज आए । कोठाबाट करिव १५ मिटर माथिपट्टी सेन्ट्री पोष्टमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीबीच खैलाबैला मच्चियो । ‘आतंककारीहरु बम पड्काउँदै अघि बढ्दैछन्, कोही नडराउनु, सबै एलर्टमा रहने’ जवाफी फयर गर्दै उनीहरू भन्दै थिए ।
म खाटबाट ओर्लेर ढोकाको आड लिई उभिएँ । नजिकैबाट आएका गोली र विष्फोटका आवाले मनमा चिसो पस्यो, चिट् चिट पसिना निस्कन थाल्यो । कोठा नजिकै चार/पाँच सेन्ट्री पोष्टमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीले प्रतिकार गर्दै थिए । माओवादीले घरको तल्लो भागतिरबाट हमला गर्दै थिए । म तीनतिर ठुल्ठुला शिसाका झ्याल भएको बन्द कोठाभित्र निस्तब्ध थिएँ । तर, जोखिम मोलेरै भएपनि भिडन्तको समाचार कभर गर्नै अठोट लिएँ ।
भिडन्त भएको आधाघन्टा भयो । फोनसेट ढोकातिरको भित्तामा तानें । फोनमा बोलौं सबैकुरा बाहिर सुनिने डर, नबोलौ- सदरमुकाम आक्रमणको समाचार छुट्ने झन् ठूलो डर । आखिर जे पर्ला व्यहोर्नुपर्छ भनेर विराटनरस्थित कान्तिपुर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयमा फोन लगाएँ ।
‘माओवादीले आक्रमण थालेपछि भरखरैदेखि भिडन्त चर्किएको छ’ विराटनगरमा अग्रज सहकर्मी माधव घिमिरेलाई हतार हतार फोनमा भने ‘बिजुली निभिसक्यो, सायद फोनको लाइन पनि अब रहँदैन ।’ आपतमा सान्त्वना दिंदै आफू जोगिंदै सम्भवहुञ्जेल सर्म्पर्कमा रहन र सकेजति जानकारी बटुल्न भन्नुभयो । भिडन्त झन् बढेकाले कोठाभित्र बस्न सक्ने अवस्था रहेन । बिस्तारै ढोका उघारेर छतमा निस्किएँ । शुरुतिर सकेट बम पड्काउँदै सुरक्षा घेराभित्रका कार्यालयतिर बढेका माओवादीले करिब आधा घन्टापछि आधुनिक र शक्तिशाली हतियार प्रयोग गरेको अनुभव गरें ।
चियावारी, वीरेन्द्रचोक, भीमसेनस्थान, रेडक्रसमार्ग, नारायणथान, गढीथुम्का, धोबीधारालगायत स्थानबाट लामो दूरीसम्म गोली प्रहार गर्नसक्ने अत्याधुनिक हतियारले आक्रमण गरेको जस्तो लाग्यो । बजारक्षेत्र निर्जन बस्ती जस्तो लाग्ने गरी अन्धकारमय देखियो । बजारतिरको भाग छ्याङछ्याङी देखिए पनि प्रहरी कार्यालयतिरबाट चलाइएका गोली रोकिनसक्ने भित्ता भएकाले त्यसैको आड लिएर फोन सेट च्यापी चिसो भुइँमा बसें । छोटो समयमा पनि कार्यालयमा भिडन्तबारे पटक-पटक कुराकानी हुँदा त्यतिन्जेलको अवस्थाबारे जानकारी गराउन भ्याएँ । यसले केही सन्तोक लाग्यो । जिल्लाका साथीभाइ र शुभचिन्तकसँग भने चाहेर पनि बोल्नसक्ने अवस्थामा थिइनँ । बोलेका कुरा भिडन्तमा सक्रिय माओवादी र सुरक्षाकर्मी दुबैले सुन्ने संभावना थियो । जे पनि हुन सक्थ्यो नि !
सूचना आदानप्रदान भइरहेकै बेला अचानक फोन लाइन काटियो । बिजुली निभेको निकै समय भइसकेको थियो । लुकेर बसेको ठाउँबाट आकाशतिर शिर उठाउँदा ‘भेरी लाइट’ को उज्यालोसँगै बिजुली गतिमा बज्रिएका बम र गोलीका र्छरा पनि हुँइकिएका देखिन्थे । घरी-घरी त ठूलो धक्कासहित नजिकैबाट चुइं..चुइं गर्दै त्यस्ता र्छरा वारपार पनि भए । डर शुरुमा भन्दा कम भइसकेको थियो र पनि दुइतिरबाट गोलीबारुद भएको बीचमा बस्नु थप खतरा हुने निधो गरंे र तीन तलामुनिको भुइंमा झर्ने सुर कसें ।
ढोका तानेर कछुवाको तालमा तल झर्नुपर्यो भन्ठानेको तर सिंढीको माथिल्तिर आँखीझ्याल थियो । झ्यालको उतापट्ट िसेन्ट्री पोष्ट थियो, जहाँबाट आफ्नो प्रतिरक्षासँगसँगै माओवादीलाई अघि बढ्न नदिन मच्चिइ मच्चिई सुरक्षाकर्मीले बम फ्याँक्दै गरेको देखें । त्यसबेला हिंडियो भने सुरक्षाकर्मीले तलमाथि गरेको देखिंदा निशाना पो बनिने हो कि शंका उव्जियो । केहीबेर पर्खिएँ र अलि सेकेन्ड विष्फोट कम भएको मौका पारेर झरें । सोचेको थिएँ- छिमेकी दाई हिमाल डंगोलको कोठामा पस्छु भन्ने, तर भयो अर्कै ।
अँध्यारो भुइंतलामा पुग्नासाथ खुट्टामा च्याप्पै समातेर तीनजना परिचित दिदीले ‘हामीलाई पनि सहारा हुने सँगै लुकौं, बाहिर निस्कनु हुँदैन खतरा छ’ भन्दै चिसो भुइंमै बसाइहाले । उनीहरु प्रहरीका पत्नी थिए । बिचरा कोठा मेरो जस्तै संवेदनशील ठाउँमा भएकाले दूधमुखे छोराछोरी काखमा च्यापेर आँखाभरी आँशु पारेर एकथुप्रो भएका रहेछन् । बाहिर चलिरहेको भिडन्तमा आफ्ना पतिहरु मरे कि बाँचे भन्ने चिन्ताले मरिच झैं चाउरिएर बिलौना गरिरहेका उनीहरुको आग्रह अस्वीकार गर्न सकिनँ र सँगै टुक्रुक्क बसें ।
छेवैको शौचालयको दर्ुगन्धमय अवस्थामा बसिरहँदा भिडन्त चरमोत्कर्षा पुगेको थियो । शुरुतिर सुनिने गोलीका सानातिना आवाजलाई ठूला विष्फोटले विस्थापित गराइरहेका थिए । जमीन दुरुरु थर्किने गरी बम पड्किंदा कानको जाली फुट्न खोज्थ्यो । अतालिएर चर्को स्वरमा रुन खोजे पनि आमाहरुले मुख थुनिदिएकाले हिक्क…हिक्क मात्र गर्न पाएका प्रहरीका नानीहरुका कानमा हतार-हतार कपास हालिदियौं । अनि उनीहरु अलि मौन भए ।
तिर्खाले मुख सुकेर हैरान भएका बेला घडी हेर्दा रातको एक बजेको रहेछ । भिडन्त मत्थर हुनु साटो बढ्दो थियो । नेपथ्यमा कोही सुरक्षाकर्मीहरु ‘ऐइया…गोली लाग्यो’ भन्दै चिच्याउँथे भने कोही चाहिं ‘गोली सकिन लाग्यो’ पनि भन्दै थिए । त्यस्तो सुनेपछि सुरक्षाकर्मी पराजित हुन लागेका हुन् कि भन्ने शंका लाग्थ्यो । त्यतिनैं बेला माओवादीले माइकबाट सुरक्षाकर्मीलाई ‘हामीले जितिसक्यौं, तिमीहरु आत्मर्समर्पण गर नत्र मारिन्छौ’ भन्दैथिए । ती कुरा सुनेपछि संगै रहेका तीन प्रहरी पत्नी भने ‘ला…अब मारिने भए’ भन्ने खालका कुरा गर्दै आफ्ना पतिहरुको चिन्ता गरेर एकसाथ रुवाबासी गर्न थाले ।
उनीहरु कोही बिहार घर भएका भारतीय थिए भने कोही तर्राईका आदिवासी समुदायका । त्यही भएर नेपाली बोल्न मात्र होइन बुझ्न पनि सक्दैथे । रुनमा आमाहरुलाई तिनका छोराछोरीले साथ दिइरहेका थिए । सम्झाउन खोज्यो तर, आवाज निकालेर बोल्न बाहिरको अवस्थाले सकिंदैन, नबोलौं स्थिति डामाडोल भइसकेको छ । बोल्न भाषाको पनि समस्या । हातको इशाराले र अलिअलि कुरा गर्दै धेरैबेरपछि बल्ल उनीहरु रुन छोडे । जति धेरै पड्कियो कोही भगवानको नाम जप्थे भने कोही अब कसरी बाँच्नु भन्दै भक्कानिन्थे । आफूलाई पनि भिडन्तको त्रासले नसताएको त होइन तर त्यहाँ व्यक्त गर्ने स्थिति थिएन । आपत्को अभिभावकजस्तै न भइएको थियो !
स्थिति जटिल भइसकेको अवस्थामा हेलिकप्टरको आवाजले लुकेर बसेका हामीलाई केही सान्त्वना मिल्यो । सुरक्षाकर्मी भने साह्रै खुसी भए । माओवादीले आक्रमण मध्य भएका बेला शक्तिशाली बम विष्फोट गराउन थालेपछि सुरक्षाकर्मीले पनि उस्तै शक्तिशाली विष्फोट नगराएका होइनन्, तर जर्वजस्ती ल्याइएका जनसाधारणसहित महिला र पुरुष छापामार गरी तीन/चार हजारको संख्यामा आएका माओवादीसामु थोरै संख्याका सुरक्षाकर्मी डराउन खोज्नु अस्वभाविक पनि थिएन ।
‘नाइटभिजन आयो….अब नडर्राई लड्नुपर्छ’ भन्दै र्सुइ…र्सुइ पार्दै उनीहरुले गोली र बम आक्रमणको मात्रा बढाएको विष्फोटको आवाज तीव्र भएपछि अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । हेलिकप्टरले आकाशबाट बजार क्षेत्र गस्ती गर्न थालेपछि प्रहरी पत्नी मात्र होइनहरुका छोराछोरी पनि अलि चिन्तामुक्त देखिए । डेढ घन्टाजति चक्कर लगाएपछि हेलकप्टरको आवाज सुनिन छाड्यो । भिडन्त भने ज्यूँकात्यूँ थियो । पानी पिउन नपाएर काकाकूल बनेको थिएँ । सुरक्षाकर्मीको सशक्त प्रतिकारले भिडन्तको शुरुदेखिनैं त्यति अघि बढ्न नपाएका माओवादीहरु उज्यालो हुन लागेको अवस्थामा पुनः हेलिकप्टरले गस्ती गर्न थालेपछि पछि हट्न थालेका थिए । अनि विष्फोट कम भयो ।
घन्टौंसम्म भिड्दा पनि सुरक्षा घेरभित्र पस्न नसकेपछि माओवादी छापामारहरु अन्त्यमा बिहान साढे तीन बजेतिर पश्चिम र उत्तरका गाउँतर्फभागेका थिए । कडा सुरक्षाघेराभित्र रहेका सेनाको भवानीदल गण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, अदालत, जिल्ला प्रहरी, पुवाखोला जलविद्युत आयोजनालगायतका कार्यालयलाई मुख्य निशाना बनाएर माओवादीले एकसाथ आक्रमण शुरु गरेका उनीहरुले केही हतियारसहित बन्दोबस्तीका सामग्रीमात्र होइन इलाम आक्रमणमा एक दर्जन जति लडाकु छापामारलाई पनि गुमाउनुपर्यो ।
रक्षा मन्त्रालयले त भिडन्तमा मारिने माओवादीको संख्या ४० देखि ५० बीचमा भएको दाबी गरिरहेको छ । घटनामा विष्फोट र बमबारीको आवाज अत्यधिक सुनिएकापछि जनसाधारणले मानवीय तथा भौतिक क्षति धेरै भएको अनुमान गरेका थिए । तर त्यसको तुलनामा कम क्षति भएको छ । जीवनमा कहिल्यै नसुनेका विष्फोटका ती चर्का आवाज सुन्दा इलाम बजारका निकै घर र प्रशासनिक कार्यालयहरु ध्वस्त भएका होलान् भन्ने सोचेको थिएँ । माओवादीले कारागार मात्र ध्वस्त गरेका छन् र त्यहाँबाट उनीहरुले एकसय तीनमध्ये ६० जतिलाई भगाएका छन् ।
मुलुक द्वन्द्वग्रस्त भएका बेला विद्रोहीबाट आक्रमण हुनु सामान्यै मानिन्छ । तर, त्यसबेला हुने भिडन्तका क्रममा निर्दोष र्सवसाधारणले पनि आफ्नो ज्यान जोगाउन ठूलो संर्घष गर्नुपर्ने परेरै जानियो । मैंले समाचारका लागि केही जोखिम मोल्न खोजे पनि भिडन्तका बेला पहिले ज्यानै जोगाउन खोज्नुपर्ने हो, तर म बसेको घर तथा आसपास क्षेत्रमा त्यो सम्भव थिएन । कतिपयले गाईको गोठमा लुकेर आफूलाई जोगाए भने कोही चर्पी र ड्रमभित्र पसे । द्वन्द्व र युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएका र्सवसाधारण कसरी चेपुवामा पर्छन् भन्ने कुराको प्रत्यक्ष उदाहरण आँखैअघि र्छलंग भयो । युद्धरत् पक्षले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि र्सवसाधारण चेपुवामा नपरुन् भनेर व्याबहारिक रुपमै सचेतता अपनाउनु अनिवार्य हो भन्ने अनुभव भयो ।
बेनुपराज भट्टर्राई कान्तिपुरका इलाम समाचारदाता र यूडब्ल्यूबीका ब्लगर हुन् ।
25 thoughts on “समाचारका लागि ज्यान बचाउँदै…”
Either Mr. KG &#38; Maoist have direct talk or lauch EXTREME search and destroy operation ..
तर जर्वजस्ती ल्याइएका जनसाधारणसहित महिला र पुरुष छापामार गरी तीन/चार हजारको संख्यामा आएका माओवादी
I guess जर्वजस्ती ल्याइएका जनसाधारण were not there for picnic. Were not they Human shields of MBs?
See how arrogant the “maoist for people” is. This has beenanorm to them to threat journalists &#38; its people, hiding behind the manhole thinking they are king of wisdom lutiyeka hathatiyaar haru ko aad ma.
3rd–mbs for P &#38; G…anti-democracy and anti-people
Can you please explain about this line: तर जर्वजस्ती ल्याइएका जनसाधारणसहित महिला र पुरुष छापामार गरी तीन/चार हजारको संख्यामा आएका माओवादी…
जनसाधारण: Mr. Bhattarai can tell us whether they were not carrying any arms or guns. If they were not carrying arms then they were not there for PICNIC either. Everey body knows the atrocities of MBs and their past &#38; can tell they were forced to be there as humans shields.
My guess Mr. Bhattarai is not trained or protected to interview जनसाधारण in the middle ofabattle field.
hamla sabai ko khayal rakhna parcha tina jata maila chikna le ke huncha hahahahahahhahahaha